जापानको १०० यनको पसलमा(ह्याकु यन सप) किन्न सकिने ९ उपयोगी साधन | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > LIVE and WORK > जापानको १०० यनको पसलमा(ह्याकु यन सप) किन्न सकिने ९ उपयोगी साधन
जापान आउनु भएका हरेकले यहाँको १०० यन सपको ’boutमा सुन्नु भएको वा जानु भएको होला। नाम जस्तै यो पसलमा हरेक समान १०० यन (ट्याक्स बाहेक )मा पाइन्छ। रमाइलो कुरा यहाँ अनेक भेराईटिका समान पाईन्छ। फुड, स्न्याकस, स्टेसनरीका समान केहि उदाहरण मात्र हुन्। आज हामी हजुरहरुलाई यी ह्याकु यन स्टोरका ९ समानहरु बताउनेछौ जसको भ्यालु १०० यन भन्दा निकै माथि छ। यी समानहरुले हजुरको दैनिकी निकै सहज बनाउने छ। के हुन् त ति समान?
१. एग (अण्डा) टाईमर
एग टाईमरले हजुरलाई अण्डा हजुरले चाहेको जसरि उमाल्न गर्न मद्दत गर्छ। माथि चित्रमा देखाईएको जस्तै एग टाईमरलाई अन्दा संगै उमाल्ने भाडोमा हल्नुहोस। एग टाईमरको कलर समय संगै फरक हुदै जान्छ। हरेक कलरले अण्डाको पाकेको स्थिति बताउछ। टाईमरको रंग बद्लिएपछि अण्डा निकाल्नुहोस्। यो टाईमरको प्रयोगले हजुरले हार्ड बोइल होस् वा हाल्फ़ बोइल्ड आफुले चाहेको जसरि अण्डा उसिन्न सक्नु हुनेछ।
२. दोकोदेमो क्याप वा ह्याण्ड सिलर
दोकोदेमो भनेको जापानीमा जहाँ पनि हो। नाम जस्तै यो जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बिर्को वा क्लिप हो। स्टोर बाट किनिने प्लास्टिकमा प्याक भएका समान जस्तै चिनी, नुन, पिठो वा ठूलो चिप्स होस् यी सामानहरु एक चोटीको प्रयोगमा सकिदैनन। यो ह्याण्ड सिलरले हजुर यी प्लास्टिककमा भएका समानहरुको मुखमा क्लिप गर्न सक्नु हुनेछ। यसले हजुरको समान पोखिन बाट बचाउछ अनि एअर टाईट पनि राख्दछ।
३. आईरन मिट
आईरन मिट १०० यन सपमा अपाईने अर्को अचम्मको प्रोडक्ट हो। यसको प्रयोगले हजुरको कपडा आईरन गर्न निकै मद्दत गर्छ। यसलाई आईरन बोर्डको जसरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर आईरन बोर्ड जस्तो ठूलो नहुने र यो कपडा झुण्ड्याएरै आईरन गर्न मिल्ने हुनाले निकै सहज हुन्छ। अर्को फाइदा भनेको आईरन मिटको प्रयोगले एक साईड मात्र आईरन गरे हुन्छ अर्को साईड यसले आफै स्मूद बनाउछ।
४. पिलो ड्राअर
A post shared by HomeNeedID (@homeneedid) on Mar 27, 2019 at 12:17pm PDT
यदि हजुरले घरको सिरानी धुनु भएको छ भने त्यसलाई सुकाउनको झन्झट थाह छ होला। भरि हुनाले यो सुकाउन निकै अप्ठेरो हुन्छ। जापानीहरुले यो सिरानी सुकाउने ह्यांगर बनाएका छन्। यो ह्यांगरले धेरै ठाउ पनि ओगट्दैन र प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ।
५. चामल धुने छान्नी
धेरैलाई चामल धोएर पानि तार्न निकै झन्झट हुने गर्दा छ। पानि तार्दा चामल पनि पोखिने समस्याहुने हुनाले जापानीहरुले यो छान्नी बनाएका हुन्। यसको प्रयोगले चामल पोखिने समस्या हुदैन। छैन त यो साधन उपयोगी ?
६. लेमोन जुसर
यो एक कमप्याक्ट जुसर हो। यो थोरै मात्राको जुस निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गर्न मिले फलफुलहरुमा सुन्तला र कागती पर्छन। यसले जुस बनाउने समय र झन्झट बाट बचाउछ। यो सानो जुसर लिनुस र कागतीको टाउको पट्टि गाड्नुहोस्। त्यति गर्ने बित्तिकै मिसिनको क्याप थिच्नु भयो भने जुस आउछ। यो सानो हुने हुनाले जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
७. माइक्रोवेभ रामेन कुकर
यो रामेन कुकर प्लास्टिकमा हुने इन्स्ट्याण्ट नुडल्सको लागि हो। जापानमा कुनै कुनै नुडल्स सिडी खान मिल्ने भाडोमा नहुने भएकोले यो भाडो बनाइएको हो। यसमा नुडल र पानि हालेर माईक्रो वेभमा पकाउनु भयो भने निकै राम्रो संग पाक्छ। पकिसकेपछी सिधै यस बाट खान मिल्ने यो धेरै भाडो झुठो बनाउन नचाहनेहरुको लागि उपयोगी समान हो।
८. कावा इन पिलर
यो फलफुल तास्ने सामान्य पिलर भन्दा अलि फरक हुन्छ। यसमा अरु पिलर जस्तो ह्यान्डल हुदैन। यसको आकार कम्प्युटरको माउस जस्तै हुन्छ र माउस समातेको जसरी समाएर तास्नुपर्ने हुन्छ। अरु पिलर जस्तो बोक्रा बाहिर छरपस्ट पनि हुदैन। पेन्सिल तास्ने जस्तै यसमा पनि बोक्रा भित्रै रहन्छ। जसले गर्दा बोक्रा फ्याक्न सजिलो हुन्छ।
पानि उमल्दा, पास्ता वा सब्जी उमल्दा पानि उम्लिएर पोखिएको सबैलाई थाह होला। पाकुन्जेल त्यहि उभिएर बस्न पक्कै पनि झन्झटिलो काम हो। जापानको दाईसो नामको कम्पनिले यो निकै मजाको प्रोडक्ट बजारमा लिएर आएको छ। यो चिज भाडोको पिधमा राख्नुहोस अनि खानेकुरा निर्धक्क संग उमाल्नुहोस्। यसको प्रयोगले पानि उम्लिएर पोखिने छैन।
यी ९ समानहरु सबै १०० यन (ट्याक्स अलग) मा आउछन। आशा गर्दछौ यी सामानको प्रयोगले हजुरको दैनिकी थोरै भएपनि सहज बनाउने छ।